Vanosarudzwa Maofficial uye Vanotungamira Service
Sarudza Basa Rakavanzika
Kuwedzera kune Hofisi Zvirongwa (inozivikanwawo seCorporate Hofisi Chirongwa), Makambani Anofambisirwa anopa sevhisi yakasarudzana kukupa iwe BIG yakawedzera chikamu chekuvanzika uye chengetedzo. Kuti tidzivirire vatengi vedu kubva pameso ekutsikirira, Makambani Akafukidzwa anopa edu Basa Rekusarudza. Paunosainira sevhisi iyi, tinopa mumwe weatinoshamwaridzana naye kuti akutsigire sevakuru nevarairidzi vekambani yako. Iyi sevhisi inowanikwa neNevada neWyoming Corporations, uye inongopihwa kamwe chete $ 500 pagore. Vanosarudzwa pamwe nePamutemo Shield Chirongwa uko wedu anosarudza anobatsira nemakambani masangano anongova $ 1995 pagore.
Kana mukuru wezana akasarudzika kana mukuru mukuru akagadzwa, iwe (muridzi wehuwandu hwezvitoro) unogona kuramba wakakwana mukutonga kwakazara kwesangano rako. Unochengetedza kodzero dzese dzekusaina pane chero maaccount emari, unochengetedza kodzero yekuisa chero hurongwa hwezvemari kana hwekureja nechinhu chero chipi zvacho, nezvimwe. Sezvo ruzhinji rune mukurumbira, unogona, chero nguva, kuvhota ivo vanosarudza maofficial mubatanidzwa. kana ukasarudza. Pamusoro pezvo, sezvakataurwa pamusoro apa, unochengetedza kodzero dzese dzekusaina pamusoro pemakaundi ese emabhangi- Makambani ako Anosungirwa madhizaina haabate chero mari inobatanidzwa nekambani sezvo vasina mukana kana kusaina mvumo pamusoro pechero account yeboka. Ivo vanongochengetedza zvakavanzika zvako nekuzadzisa chinodiwa chepamutemo chekambani kuti ive nemutungamiriri mumwe kana kupfuura vakanyorwa.
Kazhinji, vatengi vedu vanoraira Corporation, Corporate Hofisi Chirongwa uye Iyo Nominee Service pamwe sepasuru. Kuti ugadzire Corporate ne Corporate Office Chirongwa uye Nominee Service, shanyira nzvimbo yedu yakachengeteka yekuraira.